दार्जीलिङवासी आन्तरिक उपनिवेशमा बाँचिरहेका छौँ: कवि मनप्रसाद सुब्बा - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsदार्जीलिङवासी आन्तरिक उपनिवेशमा बाँचिरहेका छौँ: कवि मनप्रसाद सुब्बा
August 17, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार, संवाद 0
१५ अगस्ट, ‘विश्वको ठूलो लोकतन्त्र’ भारतको स्वतन्त्रता दिवस। भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ‘सबका साथ सबका विकास’ को नारासहित धुमधामसँग स्वतन्त्रता दिवसमा सहभागी भइरहँदा भारतको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, १९९८ बाट सम्मानित दार्जीलिङका कवि मनप्रसाद सुब्बा भन्दै थिए, ‘हामी आन्तरिक उपनिवेशमा छौँ।’ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा कवि महेश पौड्यालले सम्पादन गरेको ‘मनप्रसाद सुब्बाका प्रतिनिधि कविता’ सङ्ग्रहको विमोचन समारोहमा उनी भनिरहेका थिए, ‘भारतको स्वतन्त्रता दिवस मनाउने चाहना दार्जीलिङका जनतामा पनि छ तर त्यसबाट हामीलाई वञ्चित गरिएको छ।’
नेपालका मूर्धन्य कवि वैरागी काइँलाको बायाँपट्टि बसेका उनले यस पटक नेपाल आउने क्रममा भोगेको दुःख पनि बाँडे: ‘अनुमति लिएर आउनुपर्‍यो।’ विगत २९ वर्षदेखि साहित्यिक चर्चाका लागि र इष्टमित्र भेट्न वर्षमा तीन पटकसम्म नेपाल आउजाउ गरिरहेका उनले यो पटक नेपाल छिर्दा हातमा ‘अनुमतिपत्र’ बोक्नुपर्‍यो। यता आएपछि भने साहित्यकार र पुराना साथीहरू भेटेर ‘ऊर्जा थपिएको’ उनले बताए।
समयानुकूल फरक शैलीमा कविता लेख्ने र कवितामा अधिकांश जनताको अधिकारका कुरा उठाउने मनप्रसाद सुब्बासँग जयसिंह महराले दार्जीलिङका दुःखबारे गरेको कुराकानीः
‘यो समयको माग हो है! म समय जुन प्रकारले बाँचिरहेको छु, अथवा जुन किसिमको समयमा आफूलाई बाँचेको पाइरहेको छु, त्यो समयप्रतिको चेतना वा समय चेत हो। भनौँ न, त्यो समय चेतको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो लेखनमा त्यो प्रकारको समसामयिक कुराहरूलाई समसामयिक पाराले नै लेख्ने, समसामयिक प्रस्तुति दिने र समसामयिक पाठकहरूलाई लक्ष्य गरेर रचना गर्दा त्यसो हुन पुगेको हो।
कुरा दार्जीलिङको गरौँ, दार्जीलिङ आन्दोलित छ। यो आन्दोलनको जरो भाषा र साहित्यसँग जोडिएको छ… (बीचैमा)
भारत स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ। दार्जीलिङले कसरी ‘सेलिब्रेट‘ गरिरहेको छ यसलाई?
दार्जीलिङमा अघिल्ला वर्षहरू जस्तो उल्लास र उत्साह हुन्थ्यो, त्यो त यसपालि हुँदैन। आन्दोलनको अवस्थामा र स्थितिमा त्यो उत्साह आउने त कुरै आएन। तथापि, त्यसलाई बहिष्कार गर्ने कुरा पनि छैन। त्यसलाई पालन गर्ने हो किनकि हामी भारतका हौँ। भारतीय नागरिक हौँ र भारतको राष्ट्रिय पर्व १५ अगस्ट, गणतन्त्र दिवस २६ जनवरीलाई हामी बहिष्कार गर्दैनौँ। त्यसलाई हामी स्थितिअनुसार जस्तो प्रकारले मनाउनुपर्छ, जुन आस्था दिएर मनाउनुपर्छ, त्यसरी नै मनाउछौँ। तर त्यसमा भारतमा नेपाली जातिको प्रासंगिकतासँग जोडेर नै जानुपर्छ।
तपाईंले हामी भारतमा ‘आन्तरिक रूपमा कोलोनाइज्ड (अौपनिवेशिक) अवस्थामा छौँ‘ भन्नुभएको थियो… (बीचैमा)
दार्जीलिङमाथि राजनीति बढी भइरहेको हो कि! जस्तो: पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी दार्जीलिङ आन्दोलनसँग आतंककारीको गठजोड रहेको भन्दै छन् र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पनि केन्द्रीय सरकारमा छ, राष्ट्रपतिलगायत सबै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा हुँदा पनि माग पूरा नगर्ने तर आन्दोलनप्रति संवेदना जनाउने गरेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
बीजेपीले दार्जीलिङमा के गरिरहेको छ, के रणनीति अपनाइरहेको छ?
प्रजातन्त्र नम्बरको खेला हो। मेजोरिटी र माइनोरिटी (बहुमत र अल्पमत) को खेला हो। मेजोरिटीले अझै झन शक्ति बटुल्न माइनोरिटीलाई दमन गरिराखेकै हुन्छ। बंगालमा जति पार्लियामेन्ट्री सिट छ, जस्तै: ४२ सांसदको सिट छ, त्यहाँबाट आठदेखि १० सिटसम्म हत्याइहालौँ भन्ने रणनीति छ। यता, दार्जीलिङ क्षेत्रमा उनीहरूले सांसदको सिट पाउने भनेको एउटा मात्रै हो। त्यो एउटा सिटको लागि उनीहरूले धेरै समय खर्च गर्न र धेरै परिश्रम खर्च गर्न चाहँदैनन्। त्यतिको परिश्रम बंगालमा गर्‍यो भने ८-१० सिट आउला भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यो राजनीतिक रणनीतिले गर्दाखेरि पनि दार्जीलिङको मुद्दालाई उनीहरूले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्।
दार्जीलिङमा चलिरहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कस्ता छन्?
तपाईं भर्खरै मात्र दार्जीलिङबाट आउनुभएको छ, दार्जीलिङको वास्तविक अवस्था के छ?
इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको दुई महिना नाघ्यो। फोन सेवा बेलाबेला अवरुद्ध हुन्छ। अनिश्चितकालीन बन्द सुरु भएपछि आवतजावतमा कठिनाइ छ। आन्दोलनसँग जडित प्रमुख पार्टीका नेताहरू जो हुन्छ, उनीहरूबाट चिठी लिनुपर्छ। ‘म डाक्टर देखाउन जाँदै छु। मेरो मान्छे बिमारी अवस्थामा छ, उसलाई लगेर अस्पताल जानुपर्नेछ’, भनेर त्यो प्रकारले अलिअलि निस्किने मेलो हुँदै छ। रासन ल्याउने कामहरू भइरहेको छ। रासनका गाडीहरूलाई रोक्दैन।
दार्जीलिङको कला साहित्य वृत्तले आन्दोलनलाई कसरी लिएको छ?
नगरपार्षदिका र नारी मोर्चा सदस्या अम्बिका र सञ्जिला छेत्री पक्राउ
मदन हत्याकाण्ड: विमल छुटे, रहल आरोपीहरू विरुद्ध फ्रेमिङ अफ चार्ज २८-मा